नेपालगञ्जमा थपिदै संक्रमित, एक नम्बर वडा सील – sunpani.com
नेपालगञ्जमा थपिदै संक्रमित, एक नम्बर वडा सील
सुनपानी । २१ बैशाख २०७७, आईतवार मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज – नेपालगञ्जमा थप ६ जनामा कोरोना देखिएसँगै संक्रमितको संख्या १६ पुगेको छ । आइतबारमात्रै १५ जना थपिएका छन् । त्यही समूहका अझै केहीको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ ।
भेरी अस्पताल, नेपालगञ्जमा शनिबार स्वाव लिइएका ९० जनामध्येमा १५ जनामा कोरोना देखिएको छ । १७ गते मस्जिदमा स्वाव लिइएका ६० वर्षीयमा कोरोना देखिएपछि उनको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको स्वाव लिइएको थियो । अझै केहीको स्वाव लिने तयारी भइरहेको छ ।
कोरोना देखिएका व्यक्तिलाई आइसोलेसनमा लैजाने तयारी भएको छ । बाँकेमा खजुरास्थित क्यान्सर अस्पताललाई आइसोलेसन कक्ष बनाइएको छ । ६० वर्षीय संक्रमितलाई त्यही राखिएको छ । आइतबार कोरोना देखिएका व्यक्तिलाई पनि त्यही लैजाने तयारी भएको बाँके प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी शिवबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो । ‘कोरोना संक्रमित नाम आइपुगेको छ । हामीले खोजेर सबैलाई आइसोलेसन कक्षमा लैजाने तयारीमा छौं, डीएसपी सिंहले भन्नुभयो ।
आइतबार देखिएका अधिकांश संक्रमित वडा नं. ८ का हुन् । पहिलो दिन संक्रमण देखिएका ६० वर्षीय व्यक्ति वडा नं. ८ को जुलाहनपुरुवाको मस्जिद र मदरसामा पढाउन जाने गर्दथे । जुन टोललाई अहिले सुरक्षाकर्मीले सील गरेर राखेका छन् ।
नेपालगञ्जमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै वडा वडाले बाहिर व्यक्तिलाई प्रवेश निषेध गर्ने निर्णय गर्न थालेका छन् ।
नेपालगञ्जको वडा नं. १ धम्बोझीको सर्वपक्षीय भेलाले वडालाई सील गरेको छ । प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी र अत्यावश्यक कामबाहेकलाई वडामा प्रवेश निषेध गरिएको वडाध्यक्ष प्रमोद रिजालले जानकारी दिनुभयो । ‘वडाको चारैतिरको नाकालाई सील गरेका छौं । सबै राजनीतिक दल, टोल विकास समिति र धम्बोझी क्लवका पदाधिकारीले यो निर्णय गरेका हो, वडाध्यक्ष रिजालले भन्नुभयो, तरकारी ठेला र अनावश्यक कसैलाई वडामा प्रवेश गर्न दिइदैन ।’